Musharixiinta madaxweyne ku xigeenka Maraykanka oo dood adag ay xalay dhex martay. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Musharixiinta madaxweyne ku xigeenka Maraykanka oo dood adag ay xalay dhex martay.
Musharixiinta madaxweyne ku xigeenka Maraykanka oo dood adag ay xalay dhex martay.
Previous articleKumaandoosta Gorgor oo burburiyey saldhigyo ay leeyihiin argagixisada.
Next articleWHO oo sheegtay in ay hoos u dhaceen kiisaska la xiriira daacuunka ee Soomaaliya.